Gwara rekutsanangudza neakanakisa iOS 13 manyorerwo - Chikamu I | IPhone nhau
Kuvhurwa kweIOS 13 seyakazara yepamutemo inoshanda sisitimu iri kuswedera padyo nepedyo. Zvishoma nezvishoma isu tave kusvika pakuziva zvakawanda uye zvakawanda nhau uye tiri kukuudza nezvazvo kuitira kuti iwe ugone kugadzirira kumisikidzwa zviri pamutemo kwesisitimu inoshanda iyo inosvika mukati mehafu yepiri yaGunyana unotevera wegore rino 2019.
Nekudaro, isu tichaenda kunogadzira akateedzana ematanho ayo anotendera iwe kuti uzive zvakadzama mashandiro anoita iOS 13 uye usarasikirwa nechero cheavo masimba anogona kuita kuti iwe uwane zvakanyanya kubva kune yako iOS chishandiso. Tsvaga hunyengeri hwese hweIOS 13 iyo inobvumidza iwe kubata yako iPhone sekunge iwe uri nyanzvi yechokwadi.
1 Unganidza kuBluetooth neWiFi kubva kuControl Center
2 Rongedza mifananidzo uye bvisa maapplication
3 Set iOS 13 yakasviba modhi
4 Maitiro ekugadzirisa manyore maapplication muIOS 13
5 Maitiro ekumisikidza smart mutoro manejimendi
Unganidza kuBluetooth neWiFi kubva kuControl Center
Imwe nguva yapfuura Apple yakavhura mukana wekuti isu taigona kuona kune netiweki yataive takabatana zvakananga kubva kuControl Center, zvisinei, izvi hazvina kutitendera chero chinhu kunze kwekumisa kwenguva pfupi kana kudzima WiFi kana Bluetooth. Iye zvino Apple yagadzirisa maonero aya eControl Center kuti iite zvakanyanya kubatsira. Zvino Kwete chete isu tichava tichakwanisa kuona aripo maratidziro akananga kubva kuDhijitari Center, asi isu zvakare tichakwanisa kubatana kune iyo yatinoda nekubata kamwe chete.
Kune izvi isu tinongofanira kudaro shandisa Center Control, kumbira iyo Haptic Kubata kana iyo 3D Bata pane yekubatanidza icon, uye wozoita zvimwe chete pane iyo WiFi kana Bluetooth icon zvinoenderana nezvatinoda. Iye zvino taona kuvhurwa kwakazara runyorwa rweanowanikwa network kuitira kuti isu tisarudze kubatanidza kune iyo inokodzera zvakanyanya zvatinoda chero chikonzero. Kwetezve kutenderera-tarisa mumasevhisi ezviito, iri rimwe rebasa rinonyanya kudiwa nevashandisi veIOS mumakore achangopfuura uye neIOS 13 iri pano.
Rongedza mifananidzo uye bvisa maapplication
Apple iri kuyedza kubatanidza iyo nyowani Haptic Kubata uye iyo 3D Kubata nenzira ine hushamwari, sezvamunongoziva imi, iyo Haptic Kubata uye iyo 3D Kubata inosiyana mukuti yekutanga yakagadzirwa ne software uye yechipiri, iyo 3D Kubata, inoshandisa chaiyo nhare kuita kuyerwa kuyerwa pachiratidziri uye nekupa yakajeka mhedzisiro. Nekusvika kweIOS 13, vamwe vashandisi vakaratidza zvichemo nezve kudonha kwekuita kweiyo 3D Kubata uye nekudaro zvimwe zvinhu zvakashandurwa kuti zvive nyore kushandisa.
Iye zvino tava kukumbira Haptic Kubata kana 3D Kubata pane icon uye basa «Rongedza zvidhori» ichaonekwa pazasi pemenu yekufunga. Kana isu tikabaya pane iyi sarudzo isu tinozviponesa kubva mukumanikidza kwenguva refu kukumbira iri basa, nekuti kazhinji harisi iro. Kune rimwe divi, kana isu tangodzvanya pa "Rongedza zvidhori" isu zvakare tine mukana wekubvisa iwo manyorerwo nenzira iri nyore. Uku kuchave kugadzirisa nekukurumidza uye kwave nekuisa ese ma icon, kunyangwe iyo yapfuura yaitaridzika kunge intuitive yakakwana.
Set iOS 13 yakasviba modhi
Iyo yakasviba nzira yeIOS 13 ndeimwe yeakanyanya kukosha uye anonyanya kudiwa kuwedzerwa nevashandisi mumakore apfuura. Zvirokwazvo Apple yakafunga kuisa izvi pamwe nekuuya kweIOS 13 uye haigone kuuya pasina akateedzana masisitimu ayo, kana iwe usingazive mushe kuti mashandiro acho anoshanda sei, unogona kupotsa. Tichakwanisa kugadzirisa maawa ekushanda kwemamiriro erima uye nezvimwe zvakawanda.
Seta otomatiki erima modhi purogiramu. Zvirongwa> Ratidza uye Kupenya> Sarudzo> Tsika
Nemaoko gadzira yakasviba modhi: Control Center> 3D Bata paKupenya> Pazasi kuruboshwe icon
Gadza iyo Wallpaper: Zvirongwa> Wallpaper> Rima rinotapudza iyo Wallpaper
Aya ndiwo akanyanya kujairika mashandiro enzira nyowani yerima yeIOS 13. Isu tinofanirwa zvakare kutaura kuti Apple inosanganisira muIOS 13 nhevedzano yemapikicha anoshandura ruvara kana mamiriro erima akaitwa uye ari ega. Izvi zvinowanikwawo muZvirongwa> Wallpaper uye zvinoratidzwa senge dzakateedzana masisitimu anosanganisira iyo iOS 13 yakasviba modhi icon uye inoratidza kuratidzwa kwemashure mune ese ma modes.
Maitiro ekugadzirisa manyore maapplication muIOS 13
MuIOS 13 kwete zvese zvakagadziriswa, mamwe mashandiro akachinja chinzvimbo uye ave kushomeka sezvo Apple inotikurudzira kuti tishandise otomatiki manejimendi modhi. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezvekuvandudzwa kune iOS zvinoshandiswa. Ndi iOS 13 basa iri rave rakaomarara zvakanyanya Uye ndezvekuti nekuvandudzwa kwekugadzirwa kweiyo iOS App Store, iko iko chikamu chekuvandudza chikamu chakashandurwa kuti chiise pamberi peiyo itsva Apple Arcade sevhisi, asi usazvidya moyo.
Zvingave sei zvisina kudaro muActualidad iPhone isu tinokudzidzisa iwe zvaunofanira kuita kugadzirisa ako maApplication. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kupinda muApple App uye tinya pane iyo icon inoratidza yako Apple ID mufananidzo mufananidzo. Kamwe mukati iwe uchaona kuti pazasi iwe unenge uine runyorwa rwekushandisa, Kana iwe ukazorodza kubva kumusoro kusvika pasi, izvo zvakamirira zvigadziriso zvinoonekwa. Iwe unogona kugadzirisa imwe neimwe kana tinya pane "Gadziridza zvese ..." kuti uzvinunure pabasa rebhuku. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvisina kunaka zvakanyanya zveiyo nyowani iOS 13.
Maitiro ekumisikidza smart mutoro manejimendi
Munguva pfupi yapfuura Apple iri kuratidza kunetseka kukuru nezve mashandiro emabhatiri edu uye kusakara kwavo, nekuti izvi zvinosanganisira ruzivo rwakawanda uye rwakawanda muIOS izvo zvinotibvumidza kuongorora kupfeka kwebhatiri uyezve kudzora mashandisiro edu maitiro. IOS 13 Apple yakawedzera "Optimized Charging" system iyo inokutendera iwe kutarisira hutano hwebhatiri. Zvinoitwa nemutero wakakwenenzverwa uyu unovharidzira kuchaja kusvika ku80% pane imwe nhanho uye wozochaja kusvika pa100% painofunga kuti tichaibvisa munguva pfupi inotevera uye nekudaro, pakati pezvimwe zvinhu, kudzivirira tembiricha inowedzera iyo inoburitsa bhatiri.
Kuti tiite basa re "Optimized battery charge", zvatinofanira kuita kuenda kuZvirongwa, enda kuchikamu chebhatiri uye tinya hutano hwebhatiri. Iye zvino muchikamu chino tichaona bhatani nyowani ye "Optimized bhatiri kuchaja" inozotora mukana weambotaurwa system.
Gara wakatarwa nekuti vhiki nevhiki tinenge tichiburitsa zvikamu zvitsva zveichi chirevo mushandisi gwara kuitira kuti iwe uzive iOS 13 zvirinani kupfuura chero munhu uye siya munhu wese aine miromo yakavhurika ichiratidza ruzivo rwako nezve iOS 13. Kana iwe uine chero mupiro kana kusahadzika, usafunge nezvazvo, shandisa bhokisi remashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Gwara rekutsanangudza neakanakisa iOS 13 hunyengeri - Chikamu I